FAQs - Ningbo Abathengisi Union imp & Exp Co., Ltd.
Indawo yokubonelela izilwanyana zasekhaya
Indawo yeeMveliso zeMidlalo
Izixhobo zoKwenziwa ngaphakathi
Iimveliso zemidlalo yangaphandle
Iimveliso zentengiso yesiqhelo
Indawo yeZinto zeKrisimesi
Phezulu Ummeli waseTshayina
Intengiso ye-Yiwu kwi-Intanethi
Iindaba zaseTshayina zokungeniswa ngaphandle
FFP2 Isigqumathelo & KN95
1. Zeziphi iimpahla endinokuzithenga kwi-China Ivenkile yokuThengisa?
1. Izinto zeKrisimesi nezePati 2. Izinto zokudlala 3. Izinto zeplastiki nezasekhaya 4. Izinto zeCeramic nezeGlasi 5. Iibhokisi zemithwalo kunye neebhegi 6. Ifanitshala kunye neFanitshala yaseKhaya 7. Izihlangu zesikhumba kunye neembadada 8. Izixhobo zeHardware 9. Izixhobo zombane 10. Isikolo Sebenzisa izinto 11. Izambatho nokunxiba 11. Amaphepha okulala kunye neZembozo zebhedi 12. Izinto ezenziwe ngelaphu 13. Izinto zemidlalo 14. Izinto ezifuywa zizilwanyana zasekhaya 15. I-
Yiwu iziko lezorhwebo elikhulu ehlabathini . Ungafumana nantoni na oyifunayo apho. Ngenxa yokuba onke amaphondo anoqeqesho lwawo, ke ngoko sakha iofisi e-Yiwu, e-Ningbo, e-Shantou, e-Guangzhou ukuhlangabezana neemfuno zabaxumi.
Injani inkonzo yakho?
1. Iimveliso ezingumthombo oyifunayo kwaye uthumele ikowuteshini
2. Isikhokelo seNtengiso seYiwu kunye nophicotho-zincwadi lwaseFektri
3. Faka iiodolo kwaye ulandele imveliso
4. Ukugcinwa kwakhona kwemveliso kunye noyilo
5. ukuhlolwa kunye nolawulo lomgangatho
6. Ukugcinwa simahla kunye nenkonzo
yokudityaniswa 7. Nikezela ngokubonisana kokungenisa
8 Phatha amaxwebhu afanelekileyo
9. Ukukhutshwa kwempahla kunye nokuthunyelwa
Singenza ngaphezulu kunokuba ucinga
3. Xa ndisiya kwi-yiwu, sisebenza njani kunye?
1. Undithumelela ishedyuli yohambo lwakho yokukunceda ubhukishe ihotele kunye nezothutho.
2. Siza kwenza amalungiselelo amabini abasebenzi ukuba silandele kunye nawe kwaye sisebenze kwimarike okanye kumzi-mveliso.
3. Siza kuthumela lonke ulwazi ebusuku okanye siluprinte uxwebhu kwi ngentsasa elandelayo.
4. Kuya kufuneka uye eofisini yam ukuze ujonge kwaye uqinisekise iiodolo ngaphambi kokuba uhambe kwi-Yiwu.
Thina amalungiselelo zonke izinto kwangaphambili, ezifana: ihotele, ezothutho, namisimelelo, izixhobo (tape, nencwadi, ikhamera njl ..), ulwazi mveliso, iimveliso ezikhupha ulwazi. Abaxhasi akukhathazeki nemisebenzi Yiwu.
4. Ngaba ixabiso lakho lingaphantsi kunabathengisi abavela eAlibaba okanye elenziwe eTshayina?
Abathengisi kumaqonga e-B2B banokuba ziifektri, iinkampani zorhwebo, isibini okanye isahlulo sesithathu sabantu. Kukho amakhulu amaxabiso emveliso enye kwaye kunzima kakhulu ukugweba ukuba ngoobani ngokujonga iwebhusayithi yabo. I-China ngaphambi kokuba yazi, akukho xabiso liphantsi kodwa liphantsi e-China.
Sigcina isithembiso sokuba ixabiso elicatshulweyo liyafana nelomthengisi kwaye akukho ntlawulo ifihliweyo. Sinikezela ngendlela elula yokuthenga iimpahla kubanikezeli ngeenkonzo ezahlukileyo abanokuthi babekwe kwizixeko ezahlukileyo.Yile nto abathengisi beqonga le-B2B abanakuyenza kuba bahlala begxila kwimveliso enye yentsimi.
5. Iza kuthatha ixesha elingakanani iodolo yam?
. Ixesha lokuhanjiswa liya kuxhomekeka ikakhulu kwizinto ezimbini: ukubakho kwento kunye neenkonzo zokuhambisa.
. Sinikezela abathengi ngeenkonzo ezahlukeneyo zothutho, ezinje ngokuhambisa, ukuthuthwa komoya, ukuthuthwa kolwandle, ukuthuthwa kwezitimela, i-FCL kunye ne-LCL.
6. Ngaba kukho nayiphi na i-MOQ xa ufaka iiodolo kuwe?
Ukuba iifektri zinezitokhwe ezaneleyo, singabamkela ubungakanani bakho;
Ukuba akukho sitokhwe saneleyo, iifektri zingabuza i-MOQ ngemveliso entsha.
7. Senza njani intlawulo?
1. Emva kokubekwa kweodolo, kuya kufuneka uhlawule ama-30% exabiso lempahla njenge-postosti kuthi (Iimveliso ezichasene nobhubhane kufuneka zihlawule i-50% yexabiso lempahla njengediphozithi).
2. Nikezela ngemigaqo yentlawulo eguqukayo, naliphi na ixesha lokuhlawula T / T, L / C, D / P, D / A, O / A ziyafumaneka kwimfuno zabathengi bethu.
8. Ukuba sele ndithengile e-China, ungandinceda ukuthumela ngaphandle?
Ewe! Emva kokuthenga kwakho ngokwakho, ukuba ukhathazekile malunga nomthengisi akakwazi ukwenza njengoko ufuna, sinokuba ngumncedisi wakho ekutyhaleni imveliso, ujonge umgangatho, ulungiselele ukulayishwa, ukuthunyelwa kwelinye ilizwe, ukubhengezwa kwamasiko kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa. Intlawulo yenkonzo iyaxoxwa.
9. Kutheni ufuna arhente yiwu yorhwebo
1. Ngaphezulu kwe-80% yeefektri azinayo iLayisensi yokuThumela kwelinye ilizwe
. Uninzi lweefektri azinabasebenzi bathetha iSpanish nabathetha isiNgesi abasebenza nabathengi abancinci base China
3. Uninzi lwababoneleli abaqinisekisile njengenkampani yorhwebo eTshayina kodwa bazenza umzi-mveliso wokwenene kwaye abathengi abanakubaxelela kulwazi olungelolwenyani kwi-Intanethi.
4. Ke ngoko ukurhweba iarhente kunesidingo. Inkonzo yearhente elungileyo yokuthenga inokuma kuphela ekunciphiseni umngcipheko wokuthenga e-China kodwa inokukunceda kunye nexesha, iindleko kunye nomzamo wokufumana, ukuqinisekiswa, ulawulo lomgangatho kunye neenkonzo zasemva kokuthengisa.
10. Yintoni amandla akho?
1. Ngaphezulu kweminyaka engama-23 yamava okungenisa kunye nokuthumela izinto kwamanye amazwe
2. Unabasebenzi abangaphezulu kwe-1200. Uninzi lwabasebenzi bethu lunamava ngaphezulu kweminyaka eli-10. Bayayazi imarike kakuhle kwaye bahlala befumana ababoneleli abafanelekileyo ngokufanelekileyo.
3.Iqela lethu lakhe ubudlelwane bezorhwebo obuzinzileyo kunye neefektri zaseTshayina ezingaphezu kwe-10000 kunye nabaxumi abangama-1500 abavela kumazwe angaphezu kwe-120. Ezifana Melika, Brazil, Venezuela, Mexico, Colombia, Argentina, Spain, ePeru, Paraguay njalo
4. Ifunyanwa Yiwu, kufuneka ofisi e Yiwu, Ningbo, Shantou, Guangzhou
5. Buqu 10,000m² showroom kunye 20,000m² yokugcina
6 Abasebenzi abangama-500 + abathetha isiNgesi neSpanish ngokutyibilikayo
11. Ndingafikelela njani kwisixeko sase-Yiwu?
I Yiwu likufuphi kakhulu kunye eShanghai kunye Hangzhou, ungakwazi ukuthatha isantya esiphezulu uloliwe okanye ibhasi isixeko evela Shanghai, ukuba ufuna, nathi bangahlela imoto ukuba pick up wena ukusuka kwisikhululo seenqwelo-moya.
Le yiwu kwakhona nelayini moya ukusuka Guangzhou, Shenzhen, shantou kunye Hong Kong.
12. Njani ngokhuseleko loluntu lwe-Yiwu?
Isixeko sase-Yiwu sikhuselekile kwaye sizolile, uya kubona uninzi lwasemzini luhambahamba nokuba sekuphakathi kobusuku. Baza kuya ebharini okanye bathathe ipati kunye nabahlobo.